Niverina amin'ny endriny vaovao indray ilay lalao ASOIMI, fanatanjahantena ifaninanan’ny samy mpiasam-panjakana, izay efa ho 20 taona nisiana izay. Antsirabe no nisantatra izany, ka isan'ny nampiavaka izany ny fisokafana amin'ireo orinasa tsy miankina. Nanomboka ny sabotsy 19 oktobra teo izany, ary hitohy hatramin’ny zoma 25 oktobra.
Toerana roa no hanaovana ny hetsika, dia ny ao amin'ny ENSOA sy ny ACMIL Antsirabe. Ny baolina kitra, atletisma, tenisy, tsipy kanetibe, baskety ary ny dihy ara-panantanjahantena no hifaninanana amin'izany, ankoatry ny lalaon-tsaina isan-karazany.
Nambaran-dRalaidosy Jean Claude fa tsy hifanitsaka amin'izay hetsiky ny mpiasam-panjakana izy ireo, satria efa nahazo fankatoavana tany amin'ny ministeran'ny Ati-tany, ary efa niova ihany koa ny anarana hoe: « Association Sportive Otronin'ny Mpiasa Iray tanjona », izy ireo ankehitriny.
Ny zoma izao moa no hanaovana ny famaranana rehetra sy ny fanolorana amboara hoan'ireo mpandresy amin'izany.